India sy Sri Lanka: Dia lavitra
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » India Travel News » India sy Sri Lanka: Dia lavitra
India sy Sri Lanka
Tao anatin'ny dingana iray noraisin'ny mpandray anjara rehetra, Sri Lanka no lasa firenena farany nanasonenan'i India ny fifanarahana bubble amin'ny rivotra.
Sri Lanka no firenena faha-28 nanasoniavan'i India sonia pacte de bubble de voyage hanamorana ny serivisy amin'ny rivotra eo amin'ny firenena roa tonta.
India sy Sri Lanka dia mizara sisintany an-dranomasina nosarahan'ny Selat Palk.
Taloha dia nampidirina ny serivisy ho an'ny mpizahatany saingy naato matetika satria tsy dia mampiasa firy.
Ny bubble de voyage vaovao eo anelanelan'ny India sy Sri Lanka dia ahafahan'ny zotram-piaramanidina roa firenena manidina sy miverina amin'ny fireneny avy. Mpifanila vodirindrina amin'i India i Sri Lanka, manana fifandraisana lava eo amin'ny sehatra maro, ary misy fifandraisana ara-poko sy ara-kolontsaina lalina eo amin'ireo firenena 2 ireo.
India irery no mpiara-monina amin'i Sri Lanka, mizara sisintany amoron-dranomasina nosarahan'ny Sarin'i Palk. Repoblika roa ao amin'ny Commonwealth of Nations ny firenena roa tonta, manana toerana stratejika any Azia atsimo ary nitady hanangana elo fiarovana iraisana any amin'ny Ranomasimbe Indianina.